CHERRY NOVELLA: SHARAXAADA KALA DUWAN IYO SAWIRRADA, SIFOOYINKA IYO ASTAAMAHA, BEERASHADA IYO DARYEELKA - BEERTA
Yaryar iyo rajo-gelinta - Cherry Novella
Waa suurtagal in la qiyaaso beerta aan lahayn cherry - mid ka mid ah dalagyada miraha ugu jecel badan. Guga - this waa daruur ah ubax jilicsan, iyo xagaaga - badan oo ah berry bislaado u bislaaday.
Nasiib darro, haddii cherry hore u keenay oo kaliya tufaax ah ee dhalid, ka dibna dhowaan bacriminta ayaa si weyn u dhacay. Noocyo cusub ayaa ah rajada ah in dib loo noolaado geedka jilicsan ee caafimaad leh.
In this article waxaan diiradda saari doonaa kala duwan Novella - Cherry this horey u leedahay jawaab celin wanaagsan ee bannaanka u, iyada oo aan qabyo ahayn, sharaxaad buuxda ee kala duwan iyo sawirka dambe ee article.
Novella - noocyo badan oo jiilaal ah, jiilaal-adag jeeriga, Bisaylka dhexdhexaad ah, Ujeedada guud.
Noocyada caalamiga ah sidoo kale waxay ka mid yihiin Vyanok, Kharitonovskaya iyo Black Large.
Waxaa laga helay Orel iyada oo saldhig u ah Machadka Cilmi-baarista ee cilmi-baarista ee Dhammaan Ruushka ah ee Dalagyada Miraha ah ee loo yaqaan 'Fruit Crops' iyada oo loo marayo isku-buufinta noocyada kala duwan Rossoshanskaya iyo Soo kabashada (wuxuu leeyahay hidda-u-adkaysiga cocomycosis, oo abuuray adoo goynaya cherry iyo cherry shimbir).
Abuurayaasha - jilayaasha caanka ah A. F. Kolesnikova iyo E. N. Dzhigadlo. Sanadkii 2001, kala duwanaanshada Cherry Novella waxaa lagu daray Diiwaanka Gobalka oo lagu taliyay beerista ee gobolka Central Black Earth.
Noocyada noocan oo kale ah sida Vavilov, Rovesnitsa, Tamaris iyo Fairy ayaa sidoo kale ku habboon beertay gobolka this.
Muuqaalka jiilaalka Novella
U fiirso si gooni ah muuqaalka geedka iyo miro.
Cherry Novella - tani waa geed dhexdhexaad ah, qiyaastii 3 mitir sare, oo leh wareegsan, kicin, taaj yar oo koray. Jilifka on jir iyo lafaha skeletal - brown, on caleemaha - brownish-brown.
Keli yaryar (qiyaastii 4mm), wax yar ka yaraatay, waxay leeyihiin qaab-firfircooni.
Waraaqo mataan, cufan, cagaar mugdi ah. Qaabkoodu waa mid caqli-gal ah, oo leh calaamad fiiqan iyo saldhig fiiqan. Cirridka xaashiyaha leh ee ilkaha yar yar.
On petiole iyo saldhigga caleen waa hal shay bir ah.
In ubaxyada ee afar ubax. Fidigu waa mid bilaash ah oo cadaan ah. Dhaleeceynta pistil iyo garbaha maadada stamens waxay ku dhowyihiin heer isku mid ah.
Berry waxaa lagu xidhaa laanta gogolka ah iyo caleemaha sannadkii hore.
Midhaha Novels waa maroon, ku dhowaad madow. Dhexdhexaadiyaha ah ee berry bislaado waa qiyaastii 2 cm, miisaanka ku saabsan 5 g. Qaabka johanneselka waa mid ballaaran oo gaabis ah, oo yar yar.
Dhagaxu waa jaalaha, wareegsan, oo si fiican u kala soocaya saxarka. Miisaanka laftu kama badna 5% miisaanka berriga. Dhererka ah asliga ah waa 3.8-4 cm, berrida si fudud u soo baxdo, meesha kala go'ay weli waa qoyaan.
Berry oo dhadhan dhadhan-macaan. Cufnaanta saxarada waa mid dhexdhexaad ah, midabka maroon madow, casiir ah ee berry waa guduud mugdi ah. Miraha si fiican ayaa loo dhoofiyaa oo ha ku xoqin.
Tilmaamaha ugu weyn ee kala duwanaanta
In cimilada Ruush waxaa ka wanaagsan in ay u koraan jeeriga u dhaxeysa u adkaysta, is-bacrin, adkaysi u cudurada. Doorashada saxda ah ee noocyada waxay ka caawisaa sidii loo ilaalin lahaa miraha oo looga fogaado dhibaatooyinka daryeelka. Novella aan lahayn cadho Novella ayaa horayba u dhacay jacayl leh beeraley.
Cadaadiska Frost waxaa sidoo kale lagu muujiyey by noocyo kala duwan Lyubskaya, Lebedyanskaya iyo Generous.
Waa kuwan faa'iidooyinka:
caabbinta cocomycosis iyo moniliasis
tayada miraha oo fiican
is-baddelid qayb ahaan
TALO: Si aad u soo jiidato bees ee pollination, 1 tbsp. l Honey waxaa lagu kala diri karaa 1 litir oo biyo nadiifa ah oo lagu buufiyo xal of ubbooyin iyo ubax.
Maqnaanshaha pollinators, kala duwanaanshaha cherry Novella waxay awood u leedahay in ay si joogto ah u miro. Laakiin way ka fiican tahay haddii noocyo kala gedisan oo ay ku koraan xaafadda.
Maaddaama rukhsadaha loo yaqaan 'Novella' ugu habboon Shokoladnitsa, Vladimirskaya, Griot Ostheims.
Novella Blooms ee tobanka sano ee labaad ee May. Bisaylku wuxuu dhacaa isla mar ahaanta bartamihii July. Geedka yaryar ayaa soo galay miro sannadka afraad.
Under xaaladaha cimilada wanaagsan, beergooyska laga bilaabo hal qof oo qaangaar ah waa qiyaastii 15 kg. Iyada oo waafaqsan xeerarka agrotechnology noocaan kala duwan ayaa ah muddo dheer.
Ka mid ah cilladaha, waxaa lagama maarmaan ah in la xuso celcelis ahaan hardiness jiilaalka ee burooyinkeeda ubax. Kedib-celinta soo noqoshada ayaa ka dhimi karta beerashada miraha mustaqbalka.
TALO: Si dib loogu dhigo ubaxa barxadda ee pristvolnogo daboolka leh lakabka dheeraad ah ee barafka iyo mulch. Dhulka hoostiisa taajka ayaa sii dheeraanaya, nafaqooyinka uu xididada ku yimaado ayaa ka dambeeya, ubax ma hoos dhici doono barafka.
Tixgeli shuruucda beerto geedka Novella si looga fogaado khaladaadka soo celin kara shaqada oo dhan.
Halkee laga beeri karaa? Si loo abuuro Novels, waxa ugu wanaagsan in la doorto qayb ka mid ah beerta si fiican u kululaatay, waxaana laga ilaaliyaa dabaysha geedo, xayndaab ama dhismayaal.
Meelaha heerkoodu sarreeyo ee dhulka hoostiisa ah ayaa ka horimaanaya: dhulka hoostiisa, meelaha margada ah, bannaanka hooseeya. Laakiin haddii dhulka hoose uu ku yaal meel ka fog 2.5 mitir, ka dibna xagaaga qallalan wuxuu u baahan doonaa waraabinta.
Dhaqanka Tani waa wax aad u badan oo ku saabsan ciidda. Kuwa ugu haboon waxay noqon doonaan kuwo bacrin ah oo leh hawo fiican iyo qoyaan. Waa wax aan macquul aheyn in la ogolaado dhirta geedaha cherry.
Fududeynta maqnaanshaha waxay keenaysaa kororka qoyaanka taajka, taas oo ka qayb qaadata kororka fangaska fungal. Masaafada u dhaxeysa 3-4 m u dhexeysa dhirta ayaa noqon doonta mid la mid ah.
Diyaarinta kursiga Pit for beeritaanka guga waa ka wanaagsan inaad karsato dayrta. Cabbirku wuxuu ku xiran yahay dabeecadda carrada: waa yar tahay mid bacrin ah, waa weyn ee ceelku waa inay ahaadaan. On dhoobo culus ku dhuftay dhexroor waa 1 m, qoto dheer 0.6 m. Dhulalka iyo carrada bacaadka ah ee dhexroorka 0.8 m, qoto dheerna waa 0.5 m.
Fursadaha isku dhafan ee ciidda:miro iyo compost ama digada lagu beeray (digada cusub waxay gubi karaan xididada!) 1: 1
sareeya, humus iyo ciid oo ah saamiga 0.5: 0.5: 1
Si loo wanaajiyo midabka fowdada, waxaad ku dari kartaa 1 kg oo ah xumbo ama nuurad, adoo isku qasaya carrada. Waxa kale oo suurtagal ah in lagu daro Bacriminta macdanta (superphosphate, chloride potassium ama sulphate, ash qoryaha) ilaa hoose ee ceel, ama si ay u quudiyaan leh koritaanka geed.
Tiknoolajiyada soo degitaanka. Dawooyinka leh nidaam xidid furan ayaa la beeray guga hore, ka hor inta aanuu barar, iyo laga bilaabo - laga bilaabo Abriil ilaa Juun.
In xarunta dhexe ee qoyan beerto daloolka ah ee cabbirka nidaamka xididka iyo meel seedling halkaas. Roots waa in si xor ah loo dhigaa. Next to seedling dhig dhejinta taageerada for xiring.
Ka dib markii xididada la qariyo dhulka, ruxin fidinta si ay dhammaan wabiyada ka buuxsameen xididada. Marka xididada si buuxda loo daboolo, dhulka si tartiib ah ayaa loo jarjarey goobo.
Ka dib markii dhulka waa in si wanaagsan loo daadiyo si kor loogu qaado xiriirka xididada ee ciidda. Marka lakabka sare ee la jeexo - waxay dabacsan yihiin iyo mulch la lakabka ah ee ciidda qallalan.
DAREEN! Dhul-gashiga soo-galku waa mid liddi ku ah! Tani waxay keenaysaa koritaan la'aanta iyo aragtida dulmiga ah ee geedka.
Sannadka ugu horeeya ee wareegga jirridda waa in had iyo jeer la hayaa si habboon oo loo daboolay.
Waxaa lagu talinayaa in la iibsado saplings sanadlaha ah oo ku saabsan qiyaastii 70-80 cm ee dhererka, oo leh alwaax baaluq iyo nidaam xidid horumarsan.
Haddii seedling uu ka badanyahay hal mitir iyo mitir badhkeed, cantuna waa cagaar, macnaheedu waa in la helo qadar badan oo bacriminta nitrogen ah. Xitaa a cherry laba sano jir ah waa in aan ka badnayn 110 cm ee height.
Manjooyin keli ah. Isla markiiba ka dib markii la beero, ka hor intaan la beeriin, burcadka waa in la gooyaa, sababtoo ah sanadka ugu horeeya ee geedku ku dhaco biyo xoog leh iyo macaadin macaan. Geedka waxaa badanaa la sameeyaa boorso 25-40 cm.
Haddii wax laga beerto taajkii, ka dibna ka tago tolka dhexe iyo 4-5 laamood, kuwaas oo la gaabiyo by saddexaad.
Caleemaha dhexe waa la gooyaa si ay u noqoto 20 cm ka sarreysa kuwa dambe.
Oo haddii seedling aan la dusin, waxaa la gooyaa 10 cm kor ku jiran garabka loogu talagalay. Hooska hoose ee goobta kudheerta, ugu yaraan 5 kelyo oo si fiican u kordhay ayaa ah inay sii jiraan.
Daryeelka geedo qaangaar ah. Haddii bacriminta lagu daray godka inta lagu guda jiro beeraha, ka dibna 3-4 sano ee ugu horreeya ee bacarimiso waa laga hortagi karaa. Bacrimin dheeraad ah (3dii sanoba mar) waxay kordhinaysaa dhalidda iyo taageerida caafimaadka geedka.
Bishii Abriil, goobada ku dhow ee jilbaha waxaa la mulched digada qudhuntay. Bacriminta macdanta oo buuxa ayaa lagu shubay dhulka dushiisa waxayna ku aaseen ciidda.
Guga hore iyo dayrta goor dambe, goobada barafka ku dhow ayaa lagu qodaa foosto. Ku dhowaad dhammaan burooyinkeeda geedo yaryar ayaa si firfircoon uga dhaqaaqa koritaanka, taas oo si aan macquul ahayn u horseedda dhagxaanta dhagxaanta.
Haddii aadan fulin manjooyin, waxay u horseedi doontaa hoos u dhaca dhalidda. Sidaa darteed, dhammaan laamaha waaweyn oo ku kora gudaha taajka, gooyaa. Waxaad u baahan tahay inaad sameysid taajkii si aan ugu badneyn 10 laamood oo waaweyn. Laamiyada geedaha geeduhu waa la gaabin karaa iyadoo aan la cabsan.
XUSUUSNOW! Si looga fogaado daaweynta cirridka, hawlaha qalliinka oo aan aheyn jarida laamaha qalalan iyo in laga saaro caleemaha waa in la sameeyaa bil ka hor kelyaha oo barara. Kobacu waa tartame loogu talogalay qoyaanka iyo nafaqooyinka, iyo sidoo kale hoyga iyo cuntada loogu talagalay cayayaanka.
Novella u adkeysata cudurrada, kaas oo caan ah loo yaqaan "cudurka daacuunka" - cocomico iyo moniliasis.
Calaamadaha moniliosis waa nolol aan la daboolin talooyinka caleemaha yar yar iyo caleemaha caleemaha.
Cocomycosis waxay ku dhacdaa meel caleenta ah.
Nasiib wanaag, Novella waxaa ay saameyn ku yeelaneysaa cuduradan marar dhif ah oo gudaha ah. Marka lagu ogaado cudurrada laamaha ay saameysey waa in la gooyaa oo la gubaa.
Ilaa iyo halka laga soo xigtey infekshanka asaasiga ah ayaa caleemo gaaban, si looga hortago, waxay u fiicantahay inay gubto ilaa dayrta.
Inta lagu jiro xilliga sii kordhaya, si looga hortago cudurrada, dhirta waxaa lagu daaweyn karaa xal 1% oo ah isku darka Bordeaux ama 0.3% koloriin dioxide (30 g oo ah daroogada 10 litir oo biyo ah).
Zhukovskaya, Mayak, Malinovka iyo Podbelskaya waxay ku faani karaan caabbinta khaaska ah ee loo yaqaan 'cocomycosis'.
Berbery fool xun oo hal dhinac ah - calaamad muujinaysa in cherry lagu doorto taageeraha ugu badan ee dhaqanka this - weevil Cherry - Xummad yar oo leh jir dheer.
Waxa uu aad u taxaddaraa, marka qofku soo dhawaado, isla markiiba wuxuu ku dhacaa cawska.
Jiilaalku wuxuu ku jiraa dhulka, guga hore wuxuu ku dheregsan yahay geedo. Cuncunka caleemaha, burooyinkeeda, ubaxyo, caleemo, ugxan.
In weevil cuno cuno godad ama u cuntama si buuxda. Dirxiga, giinging iyada oo godadka lafaha, ku quudiyaan nukleus.
Siyaabaha loola dhaqmo:
Waxaa lagama maarmaan ah in la soo ururiyo dabaylaha maalin kasta, ka dibna dirxiga ma heli doonaan waqti ay ku tagaan dhulka.
Marka goosashada hoose ee weelka waxaad u baahan tahay inaad maro dhigato, ka tag midhaha miraha habeenkii, oo ku urursan hoose ee dirxiga si aad u baabbi'iso.
Lafaha cunnooyinka cunnada la cuno waa in la gubaa.
Si loo yareeyo dadka cayayaanka ah, waxaa lagama maarmaan ah in la qodo guga iyo dayrta iyo xajinta wareegga jirridda guga iyo dayrta.
Daawooyinka dadweynaha ee weevil cherry:
1.5 kg oo daboolka yaanyo ku shub baaldi biyo ah iyo isku kari ilaa nus saac. Qabooji xalka oo ku dar 40 g oo saabuun, cadaadis iyo buufin geedaha.
350 g of chop geedka iyo ku shub baaldi biyo ah. Ku adkeyso ilaa 24 saacadood, isku kari ilaa nus saac, ku dar 40 g saabuun, cadaadis iyo buufin geedaha.
Intaa waxaa dheer in weevil cherry, cayayaanka kale ayaa sidoo kale weerarka: duulis cherry, aboor ku dhalan, sawflies, trubkoverty. Waa lagama maarmaan in lala dagaallamo iyaga oo kaashanaya cayayaanka sida ku xusan tilmaamaha.
Saldhig u ah a Beer Cherry a beerto caafimaad leh waa xulashada saxda ah ee kala duwan.
Kuwa horeba tijaabiyay Novella beerahooda dhexdooda looma niyad jabin natiijada.
Iyada oo daryeel ku habboon, kala duwan ayaa bixiya ugu yaraan mashaakil ah iyo farxad bay u banneeyaa oo leh deeqsi deeqsi ah.